देउवा सरकारको ज्यादती र मनपरी विरुद्ध विप्लवद्वारा नेपाल बन्दको घोषणा ! - jagritikhabar.com
देउवा सरकारको ज्यादती र मनपरी विरुद्ध विप्लवद्वारा नेपाल बन्दको घोषणा !
देउवा सरकारको ज्यादती र मनपरिबिरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ।
‘हाम्रो पार्टी जनसरोकारको यो अन्यायपूर्ण उत्पीडनलाई मुकदर्शक भएर हेरिरहँन सक्दैन । तसर्थ सम्पूर्ण मूल्यबृद्धिका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध सङ्घर्षमा उत्रन पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठन र समस्त जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै जनभावनाको कदर गर्दै मूल्यबृद्धि तुरुन्त खारेज गर्न सरकारसँग पनि अपिल गर्दछ ।’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ। सञ्चारकेन्द्र बाट